Teknolojia | Fampahalalana mahasoa ho an'ny rehetra.
Topic: ny teknolojia
Masinina fanasana vita amin'ny fanoratana (sary)
Amin'ny toe-javatra misy ny trano kely dia misy ny tsy fetezana mifandraika amin'ny fametrahana ny kojakojan-tokantrano. Izany no mahatonga ny zavatra isan-karazany izay tsy ampiasaina amin'ny fandrahoana sakafo dia tafiditra ao amin'ny famolavolana ireo lakozia. Manokana, ny fanasana ...
Nokia C7: mampiavaka ny telefaona sy ny hevitra
"Nokia C7 00", ireo toetra mampiavaka azy dia hofakafakaina ato amin'ity lahatsoratra ity, ireo mpampiasa dia antsoina fotsiny hoe "Nokia C7". Ity smartphone ity dia omena toerana manokana eo amin'ny tsipika fitaovan'ny Nokia. Raha ny marina, ity no smartphone faharoa ...
Telefaona "Nokia Lumiya 530": hevitra, famaritana
Ny telefaona an'ny laharana Nokia Lumia dia anisan'ny malaza indrindra any Rosia. Ireo mpankafy fitaovana elektronika finday avy any amin'ny Federasiona Rosiana dia manaja ny fiteny failandey (vao haingana - de jure American - raha ny marina ny fifanarahana fanta-daza amin'ny ...
Smartphone MTS 982: famerenana, hevitra momba ny tompona ary fanondroana manokana ny telefaona
Tamin'ny 2014, araka ny fomban-drazana efa tian'ny mpampiasa maro, dia azo atao ny mividy finday finday finday amin'ny finday amin'ny vidiny mahaliana. Tamin'ity indray mitoraka ity dia notolorana antsika ny maodely MTS 982. Ny vidiny dia ...
Nokia X6: famaritana, torolàlana, sary
Miaina amin'ny tontolo maoderina, sarotra ny maka sary an-tsaina ny tenanao raha tsy misy zavatra efa mahazatra toy ny finday. Ilaintsika amin'ny asa, fianarana, fifandraisana amin'ireo olon-tiantsika, ary amin'ny fialan-tsasatra fotsiny izany. ...
Ny fandoavam-bola miaraka amin'ny bonus "Misaotra" avy amin'ny MTS Sberbank. Ahoana no fomba andoavana vola amin'ny "Misaotra" bonus avy amin'ny MTS Sberbank?
Miara-miasa amin'ny birao maro ny fikambanana MTS amin'izao fotoana izao, ny iray amin'izany dia ny Sberbank. Marihina fa manana serivisy iraisana marobe izy ireo, ohatra, ny "Payment for MTS with bonus" Misaotra avy ...
Telefaona Fly 4416 - famaritana
Ny maodelin'ny finday manidina dia tsy dia fahita firy noho ireo fitaovana mifaninana hafa, fa manana tombony maro ihany koa izy ireo. Ny hany fihenan'ity sokajy maodely ity dia ny sofina milamina. Na izany aza, tsy misy ifandraisany ...
Fakan-tsary anoloana - inona no ilana azy ary ahoana ny fampiasana azy?
Androany, ny mpanamboatra finday avo lenta dia manandrana mifanalavitra amin'ny alàlan'ny fampidirana modules sy fampiasa amin'ny fitaovana vaovao amin'ny fitaovany. Nandritra ny 5 taona mahery, ny fakantsary miatrika anoloana dia fantatra amin'ny tsenan'ny finday. Vao maraina ...
Ny milina fandroana milamina indrindra: misafidy safidy
Ela ny andro nandehanan'ny fizotran'ny fanasana fahasahiranana lehibe ho an'ireo mpikarakara tokantrano. Tsy ilaina intsony ny mandena lambam-pandriana lehibe sy fonony duvet mandritra ny alina, na manala ny hoditry ny tananao hatramin'ny ra.
Inona no atao hoe tetezana diode?
Iray amin'ireo singa fototra amin'ny elektronika maoderina ny diode. Izy io dia ampiasaina amin'ny boriborintany izay ilana fanitsiana AC, ary ampiasaina amin'ny ankamaroan'ny fitaovana ao an-trano. Hitanao amin'ny fahitalavitra izany, ...
Ahoana ny fisafidianana takelaka miaraka amin'ny fakan-tsary miaraka amin'ny bateria sy bateria (famerenana)
Ny elanelan'ireo fitaovana finday maoderina dia malalaka tokoa ka ny fanaovana safidy dia tsy dia mora loatra. Betsaka ny maodely tsy mitovy amin'ny vidiny, ny mpamokatra, ny toetra teknika. Na dia ...
Goodline: hevitra. fifandraisana amin'ny finday
Tsy takona afenina fa ny antso any ivelany dia aroso amin'ny fomba mandeha. Midika izany fa ny mpanjifa, raha te hifandray amin'ilay isa ilainy dia mampiasa ny serivisy tsy an'ny mpandraharaha azy fa an'ny orinasa vahiny (amin'ny alàlan'ny ...
Fivorianan'ny Microwave: inona izany? Fifanatonana sy fanalefahana Microwave
Raha manapa-kevitra ny hanolo ny lafaoro misy mikraoba taloha ianao amin'ny iray vaovao, dia hahagaga anao anio ny karazana maodely isan-karazany. Ny lafaoro misy microwave miaraka amina convection no be mpampiasa indrindra (ny hevitra momba azy ireo ihany ...
55 fangatahana ao amin'ny angon-drakitra novokarina tamin'ny segondra 31,023.